Dhirta buluuga ah ee qoyan / cryptocrystalline kala duwan ee silica / video
Iibso dukaankayaga dharka jilicsan ee buluugga ah
Late agate waa noocyo kala duwan oo soo bandhigaya qaab la mid ah oo leh qaababka indhaha, swirls, xargaha ama zigzags, haddii kuwanu ay badan yihiin, waxaa lagu magacaabaa lattice agate. Agate Craate leate agate, oo laga helo Mexico, ayaa had iyo jeer dhalaalaysa midab leh oo qaab dhismeedkiisu adag yahay. Agate buluug caatada ah ayaa laga helaa qaarada Afrika gaar ahaanna way adagtahay.
Agate Polyhedroid waa agate kaas oo ku koray qaab muuqaal ah oo la mid ah polyhedron. Marka la jarjarey, waxay inta badan muujinaysaa sifo dabiici ah oo ka mid ah geesoodka. Agate Polyhedroid waxaa la aaminsan yahay in laga helo kaliya ee gobolka Paraíba, Brazil. Waxaa la soo jeediyay in kobaca uusan aheyn kiniin ahaan loo xakameyn lahaa, laakiin waxaa sabab u ah buuxinta boosaska ka dhexeeya kareemada horay u jirey ee tan iyo markii la kala diro.
Ku dar Holley buluug agate, sidoo kale waxay hintay Holly buluug agate, agate madow oo jilicsan oo buluug ah oo keliya oo laga helay meel u dhow Holley, Oregon, Agate Superior, agate carnelian, waxay leedahay huruud guduudan, agate Botswana, cayilaad agate, agate condor, agate tuubada, leh qulqulka muuqda kanaalno ama tuubooyin cabbirkoodu buuran yahay, agate fo xoog u leh, oo leh isbarbardhig isugeyn xuduuda leh oo lagu xasuusto dhulal difaac ah iyo darbiyada hareeraha xeryaha qadiimka ah, Binghamite, noocyo kala duwan oo laga helay Montana oo keliya, agate dabka, oo muujinaya Flash gudaha ama dabka, natiijada lakabka ah agate cad dusha sare ee lakabka biyaha ee hematite, iyo Patuxent River dhagaxa, oo ah qaab casaan iyo hurdi ah oo keliya ayaa laga helay Maryland, oo ah halka ay ugu qurxoon tahay gobolka.
Agate waa noocyo cryptocrystalline of silica, ugu weyn ee chalcedony, lagu gartaa ay dhadhan oo hadhuudh iyo dhalaalaya of midabka. Inkastoo da 'yaryar laga heli karo noocyo kala duwan oo dhagax ah, waxay si caadi ah ula xiriiraan dhagaxyada volcanic waxayna ku badan yihiin dhagaxyada metamorphic.
Agate waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caamsan ee loo isticmaalo farshaxanka dhagaxa adag, waxaana lagu soo celiyay meelo badan oo ka mid ah goobaha qadiimiga ah, oo tilmaamaya isticmaalka baahsan ee dunidii hore, tusaale ahaan, soo kabashada qotodheer ee ka jirta goobta Knossos ee Crete waxay muujineysaa kaalinteeda ee quruxda Da'da Minoan.
Blue shalash agate